Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaalkacyo iyo sida ay saakay tahay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaalkacyo iyo sida ay saakay tahay (AKHRISO)
Wararka saakay naga soo gaarayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in xaaladda magaaladaasi ay maanta tahay mid aad uga adag sidii hore, waxaana magaalada habeenkii xalay isaga barakacay dadkii ugu dambeeyay ee shacabka ahaa ee ku noolaa labada dhinac oo ay ka kala taliyaan maamulada Puntland iyo Galmudug.
Waxaa weli galbeedka magaalada Gaalkacyo isku hor-fadhiya ciidamo ka kala tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug, waxaana la sheegaya inay dhinacyadaasi qarka u saaran yihiin in ay isku dhacaan.
Odayaasha dhaqanka ee kasoo kala jeeda Koonfurta iyo Waqooyiga magaalada Gaalkacyo, ayaa la sheegayaa inay markale baaq nabadeed kasoo saareen xiisadda ka taagan magaalada Gaalkacyo, iyagoona ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dejiyo xiisadaha labada dhinac.
Dhinaca kale, dadkii ka barakacay magaalada Gaalkacyo ayaa haatan waxaa lasoo deristay dhibaato dhinaca nolosha ah, waxaana dadkaasi qaarkood la sheegayaa inay haysato dhibaato dhinaca nolosha iyo caafimaadka ah.
Dhibaatooyinka haysto dadkaasi ayaa waxaa ka mid ah biyo la’aan, iyo sidoo kale cuduro lasoo dersay kadib markii ay gaareen deegaanada hoostaga magaalada Gaalkacyo, maadaama aysan jirin wax gar-gaar oo loo fidiyay dadkaas.
Ugu dambeyntii, maamulka Puntland ayaa dhowaan ku dhawaaqay inay la dagaalamayaan dagaalyahanada Al-shabaab iyo Galmudug oo ay sheegeen inay ku soo duuleen deegaanadooda, iyadoona dhinaca Galmudug ay iyagane sheegeen inay la dagaalamayaan ciidanka Puntland oo is-garabsanaya kooxda Daacish.